Izindaba - I-sequelae yesikhathi eside ye-COVID-19
Ukulandelana kwesikhathi eside kwe-COVID-19
UJennifer Mihas wayevame ukuphila impilo esebenzayo, edlala ithenisi futhi ehambahamba eSeattle. Kepha ngoMashi 2020, wahlolelwa ukuthi une-COVID-19 futhi wagula kusukela lapho. Ngalesi sikhathi wayesekhathele ukuhamba amakhulukhulu amagceke, futhi wayehlushwa ukuphefumula, ama-migraines, i-arrhythmias nezinye izimpawu ezikhubazayo.
Lawa akuwona amacala ahlukile. Ngokwe-US Centers for Disease Control and Prevention, amaphesenti ayi-10 kuya kwangama-30 abantu abangenwe yiSARS-CoV-2 babhekana nezinkinga zesikhathi eside zezempilo. Eziningi zazo zifana neMihas, lezi zimpawu eziphikelelayo, ezaziwa njenge-acute sequelae yokutheleleka kwe-SARS-CoV-2 (PASC) noma, ngokujwayelekile, i-sequelae yesikhathi eside ye-COVID-19, ingaba mnene noma ibe nzima ngokwanele ukuthi ingakhubaza, kuthinta cishe noma yiluphi uhlelo lwesitho emzimbeni.
Abantu abathintekile bavame ukubika ukukhathala okukhulu nobuhlungu bomzimba. Abantu abaningi balahlekelwa umuzwa wokunambitha noma wokuhogela, ubuchopho babo buyehla futhi abakwazi ukugxila, okuyinkinga ejwayelekile. Ochwepheshe bakhathazekile ngokuthi ezinye iziguli ezine-sequelae yesikhathi eside ye-COVID-19 kungenzeka zingalulami.
Manje, ukulandelana kwesikhathi eside kwe-COVID-19 kuya ngokuya kugqame. NgoFebhuwari, i-NATIONAL Institutes of Health yamemezela isinyathelo esingu- $ 1.15 billion sokuthola izimbangela zesikhathi eside se-COVID-19 nokuthola izindlela zokunqanda nokwelapha lesi sifo.
Ukuphela kukaJuni, abantu abangaphezu kwezigidi eziyi-180 bebehlolwe benegciwane le-SARS-CoV-2, kanti amakhulu ezigidi ezinye kungenzeka ukuthi atheleleke nge-SARS-CoV-2, kuthuthukiswa nemithi emisha ukubhekana nenani elikhulu izinkomba ezintsha ezingaba khona kwezokwelapha.
IPureTech Health iqhuba isigaba sesibili sokuhlolwa kohlobo lwe-pirfenidone, i-LYT-100. IPirfenidone ivunyelwe i-idiopathic pulmonary fibrosis. I-Lyt-100 ihlose ama-cytokines angama-pro-inflammatory, kufaka phakathi i-IL-6 ne-TNF-α, futhi inciphisa ukusayinda kwe-TGF-to ukuvimba ukubekwa kwe-collagen nokwakheka kwesibazi.
ICytoDyn ihlola i-CC motactic chemokine receptor 5 (CCR5) ye-antagonist leronlimab, i-anti-IgG4 monoclonal antibody yayo, esigabeni sesibili sokuhlolwa kwabantu abangama-50. I-CCR5 ibandakanyeka ezinkambisweni eziningi zezifo, kufaka phakathi i-HIV, i-multiple sclerosis, nomdlavuza we-metastatic. ILeronlimab ihlolwe esigabeni 2B / 3 kokuhlolwa kwemitholampilo njengokwelashwa okungeziwe kwezifo zokuphefumula ezigulini ezibucayi ezine-COVID-19. Imiphumela ikhombisa ukuthi umuthi unenzuzo yokuphila uma kuqhathaniswa nezindlela zokwelapha ezisetshenziswa kakhulu, kanti isifundo samanje sesigaba 2 sizophenya umuthi njengokwelashwa kwezimpawu ezahlukahlukene.
I-Ampio Pharmaceuticals ibike imiphumela emihle yesigaba 1 ye-cyclopeptide LMWF5A (aspartic alanyl diketopiperazine), elapha ukuvuvukala ngokweqile emaphashini, kanti i-Ampio ithi i-peptide inyuse konke okubangela ukufa kweziguli ezinenkinga yokuphefumula. Esivivinyweni esisha sesiGaba 1, iziguli ezinezimpawu zokuphefumula ezihlala amasonto amane noma ngaphezulu zizozenzela ekhaya ne-nebulizer izinsuku ezinhlanu.
ISynairgen e-United Kingdom isebenzise indlela efanayo ukwengeza i-COVID-19 sequelae yesikhathi eside esivivinyweni somtholampilo sesigaba 3 se-SNG001 (ihogelwe i-IFN-β). Imiphumela evela ocwaningweni lwesigaba 2 somuthi ikhombise ukuthi i-SNG001 ibilusizo ekuthuthukiseni isiguli, ukululama, nokukhipha uma kuqhathaniswa ne-placebo ngosuku lwe-28.